ओली सच्चिंदैनन्, जनबलबाट परास्त गर्नुपर्छ : डा. भट्टराई - Baikalpikkhabar
ओली सच्चिंदैनन्, जनबलबाट परास्त गर्नुपर्छ : डा. भट्टराई
२४ जेठ, गोरखा / जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जनबलबाट परास्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिले देश अध्याँरो सुरुङतर्फ धकेलिंदै गएको भन्दै उनले ओली सच्चिने अवस्था नरहेकाले जनबलबाटै परास्त गर्नुपर्ने बताए ।
सोमबार, २४ जेठ, २०७८, साँझको ०५:०६ बजे